Xulka qaranka Algeria oo Final-ka Koobka qarammada Afrika 2019 kula biira Senegal kaddib markii ay garaaceen Nigeria… + SAWIRRO – Gool FM
Xulka qaranka Algeria oo Final-ka Koobka qarammada Afrika 2019 kula biira Senegal kaddib markii ay garaaceen Nigeria… + SAWIRRO
(Qahira ) 14 Luulyo 2019. Xulka qaranka Algeria ayaa caawa iska xaadiriyey kama dambeysta koobka qarammada qaaradda Afrika iyagoo kula biiray Final-ka dhiggooda Senegal, kaddib markii ay 2-1 kaga adkaadeen Nigeria.
Kulankan oo weeraro halis ah la isku qaaday labada dhinac ayaa qeybtii hore ee ciyaarta waxaa gool helay xulka Algeria kaddib markii xiddiga Nigeria ee William Troost-Ekong uu gool aan ula kac ahayn iska dhaliyey 40’daqiiqo sidaas ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ciyaarta ku hoggaaminayeen Algeria.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay 72’daqiiqo xulka Nigeria ayaa la yimid goolka barbaraha waxaana rigoore loo dhigay kaddib markii xiddig ka tirsan Algeria uu kubbada cagta ku taabtay gool u rogay Odion Ighalo, sidaas ayuuna kulanku ku noqday barbaro 1-1.
Laakiin dhammaadkii ciyaarta daqiiqadihii lagu daray oo dhammaad ah seerigana afka uu ku hayo garsooraha ayaa laad xor ah lagu abaal-mariyey xulka Algeria, waxaana qaatay laacibka kooxda Man City ee Riyad Mahrez, kaasoo ugu shubay xulka Nigeria.
Waa xilli aysan goolkaas iska soo gudi karin Nigeria waqtiga uu goolka dhaliyey Mahrez, kaasoo qalbi jabiyey Jamaahiirta Nigeria, xulka qaranka Algeria ayaana iska xaadiriyey Final-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika 2019.
Kulanka Final-ka ayaa la ciyaari doonaa 19 bishan July, waxaana uu dhexmari doonaa xulalka Algeria iyo Senegal, halka kulanka kaalinta saddexaad ay wada ciyaari doonaan Tunisia iyo Nigeria 17 bishan July.
Griezmann oo ka hadlay shirkiisii jaraa'id ugu horeeyay isagoo ah ciyaaryahan ka tirsan Barcelona